Cidda loogu Abtiriyo Cunugga | Doodwadaag waa Danwadaag.
Marki laga hadlayo inuu guurku xaaraan yahay waxay ku timaaddaa inaan la ilaalin shuruudda guurka sida in gabadha la xoogo ama inaan la siinin wixi ay lahayd, waana 2 arrin oo u dhaxaysa labada waalid oo aan wax lug ah ku lahayn waladka la dhalayo, haddi laga heshiiyana ay wixii mushkilo ahi dhammaanayso, sidaa darteed wixii labada qof iska dhalaan mar kasta waa xalaal maxaa yeelay waa wax ay iyagu kasbadeen oo aan lala wadaagin, xataa haddi ay ahayd gabar la qabey ninkeedu ma yeelanayo wixii ay nin kale u dhasho sida wiilkii ay xaaska Nebi nuux u dhashay ninka kaleba uu u noqon waayey ina Nuux sida alle yiri; “Nuuxoow isagu ka mid ma aha ehelkaaga/يا نوح إنه ليس من أهلك”, 46: Huud.
Sidoo kale wixii awlaad ah ee la koriyo loogu yeeri maayo dadka koriyey sida Alle yiri; “Alle kama dhigin kuwa aad sheegataan awlaad aad dhasheen/وما جعل أدعيائكم أبنائكم”, 4: Al-axsaab, maxaa yeelay nasabku wuxuu ku salaysan yahay dhalasho sida in qofka la dhalo ama la nuujiyo.
Qof kasta waxaa loogu abtiriyaa waalidkii isaga dhalay sida Alle yiri; “ugu yeera aabayaashood/أدعوهم لآبائهم”, 5: al-axsaaab, aabbayaal waxaa laga wadaa wixii waalid ah oo dhan, maxaa yeelay haddi la yiraahdo “aabbihii iyo hooyadii/وأمّه وأبيه”, 35: cabasa, labada waalid waa la kala saaray sidaa darteed “ab” waxaa laga wadaa aabbaha, laakiin haddi waalidiinta la is raaciyo sida in la yiraahdo “2 aabbe/أبوان” ama “aabayaal/أباء” waxaa laga wadaa wixii waalid ah oo dhan lab iyo dheddigba.
Abtirkana waxaa laga wadaa in qaraabada la isugu xijiyo sida ay isugu xigto, qaraabaduna waxay ka timaadaa 4 jiho oo kala ah jihada aabaha, hooyada, wiilka iyo gabadha, sidaa darteed; haddi qofku ku abtirsanayo hal jiho aabaha waxaa ku xiga awowga, sidoo kale hooyada waxaa ku xiga awowga, sidaa darteed qofkii aan lahayn aabbe wuxuu ku abtirsan hooyadii iyo awowga hooyada dhalay sida Nebi Ciise (cs) oo abtirkiisu ahaa Ciise Maryama Cimraan.
Haddii uu qofku leeyahay 2 waalidna aabbaha waxaa ku xiga hooyada sidaa darteed waa in hooyadu noqoto magaca 3-aad, laakin aabbaha iyo hooyadu hadday kulmaan waxaa la hor mariyaa aabbaha maxaa yeelay aabbaha ayaa mararka qaar ka xaq badan hooyada sida dhaxalka.
Sidoo kale caruurta gabadhu dhashay waxaa loogu yeerin magaca hooyadood maxaa yeelay waxay qaraabada ka soo galeen xagga gabadha sidaa darteed caruurta ay gabdhuhu dhaleen way ka tirsan yihiin dadka hooyadood dhalay waxayna leeyihiin wixii xuquuqa ee kuwa wiilku dhalay leeyihiin.
Sidaa darteed walad kasta oo dhasha waa u xalaal dadkii dhalay xataa haddi ay iska dhaleen 2 qof oo aan isu bannaanayn sida in nin wax ka dhalo xaas aabbihii wax u dhashay sida Alle yiri; “Ha guursanina wixi dumara ee aabbayashiin guursadeen wixii hor maray mooyee/ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف”, 22: al-nisaa, wixii hor maray waxaa laga wadaa wixii mar hore dhashay ee aan la soo celin karin.
Sidaa darteed aabba kasta wuu bilayaa wixii uu dhalay haddii uu ka dhalay mid uu qabey iyo haddi kaleba maxaa yeelay dhammaan u waa xalaal sida Alle yiri; “midka loo dhalay ayaa bixinaya wixii cunno ah ama dhar ah ee dumarka waladka nuujiyey leeyihiin/وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن”, 233: Al-baqara.
Sidoo kale walad kasta wuu dhaxlayaa labadiisa waalid iyadoon loo gala saarayn mid guur lagu dhalay iyo mid kale sida Alle yiri; “dhammaan (rag iyo dumar) waxaan ka dhignay kuwo dhaxlaya wixi ay ka tageen labada waalid iyo kuwa dad ugu dhow/ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون”, 33: Al-nisaa.
Qore: Cabdalle Aw-xasan